DAAWO MUUQAAL: Al- Shabaab oo Saraakiil muhiim u ahaa iyo maleeshiyadii ugu badnaa ku weyday dagaalo & Duqeymo ka dhacay Buuraleyda Caalmadow. – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Masuul ka tirsan xisbiga UCID oo fashiliyey siraha Muuse Biixi & Arin aanan la filayn oo banaanka timid 15 mins ago
DAAWO:Ururka Iskaashatada Qaadka ee Somalia oo weeraray ku qaaday Kenya & Madaxweyne Farmaajo oo gurmad culus helay “Dalkayaga Ayaa Nooga Qaalisan Wax Walba” 1 hour ago
DAAWO:Hargeysa oo ay madaxa iskula jiraan Dowladda Hoose & Wasaarad kamid ah maamulka Muuse Biixi kadib markii…. 1 hour ago
DAAWO:Madaxweyne Denni oo Hargeysa looga soo hanjabay & Wasiir afka furtay kadib markii Goboladda Sool, Sanaag Iyo Cayn….. 2 hours ago
DEG DEG:Magaalada Bosaaso oo caawa kala xidhan & Ciidamadii ugu badnaa oo gudaha u galay + Maxaa Cusub? 2 hours ago
Home 2018 June W.Gudaha, Wararka Maanta, Warbixino DAAWO MUUQAAL: Al- Shabaab oo Saraakiil muhiim u ahaa iyo maleeshiyadii ugu badnaa ku weyday dagaalo & Duqeymo ka dhacay Buuraleyda Caalmadow.
DAAWO MUUQAAL: Al- Shabaab oo Saraakiil muhiim u ahaa iyo maleeshiyadii ugu badnaa ku weyday dagaalo & Duqeymo ka dhacay Buuraleyda Caalmadow.
June 4, 2018 |by W LAASCAANO| 5
GALGALA(P-TIMES)- Ciidamada Difaaca ee Puntland sidda gaarka ahna u tababaran ayaa labo weerar oo xoog leh ku qaaday goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Argagixisada ah ee Al- Shabaab, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey dhimashada in ka bada 50 dagaalame oo katirsanaa kooxdaas.
Weerarkii ugu horeeyey ayaa dhacay 2-dii bishan, waxayna ciidamadu subaxnimadii ilaa duhurnimadii weerar culus ku qaadeen deegaanka Maraje oo katirsan Buuraleyda Caalmadow, halkaas oo ay xiligaas marayeen maleeshiyada Al- Shabaab ee weerarka ku qaaday habeenimadaas saldhig ay ciidamadu ku lahaayeen deegaanka Bali-Khadar ee gobalka Barri.
Al- Shabaab weerarkaas ay ku qaadeen ciidamada Difaaca Puntland waxay ku waayeen 76 katirsan dagaalamayaashooda oo la dilay iyo dhaawac 32 dagaalame oo kale, waxaana halkaas looga qabsaday inta badan hubkii ay wateen, iyadoo ay ciidamadu baahiyeen meydadkooda oo goobta daadsan sawirro laga soo qaaday.
Goobta lagu galay waxay doonayen in ay ku nastaan ama ay ugu yaraan ku keydsadaan hubka culus oo ay saacado dheeraad ah wateen, waxayna sidaas oo kale kusugayeen goobtaas Awr ay ku rartaan hubka ay wateen laakiin weerar culus ayaa qabsaday.
Sidaas oo kale maalintii shalay labo weerar oo duqeymo cirka ah iyo weerar lugta ah iskugu jira ayaa lagu qaaday isla goob ku dhaw aaggaas, oo ay xiligaas ku sugnaayeen firxadka maleeshiyadii ka hartay weerarkii lagu qaaday maalin kahor, waxayna wadeen aasida qaar kamid ah meydadkii ay dhaawac ahaanta ku qaateen.
HALKAN RIIX SI AAD U DAAWATO MUUQAALKA MEYDADKA
Lix rati oo ay doonayeen in ay dhaawacyadooda ku qaataan ayaa la qabtay, sidaas oo kalena waxaa laga qabtay inta badan wixii ay haystaan, iyadoo halkaas uu kasoo gaaray khasaare kale oo lagu sheegay tiradda dhimashada in ka badan 14 dagaalame, taas oo ka dhigan in labo maalmood gudahood ay ciidamada Puntland dileen in ka badan 70 nin oo katirsanaa maleeshiyaadka Al- Shabaab.
Majirto faahfaahin dheeraad ah oo ilaa hadda laga bixiyey howlgaladan, balse warar hoose oo lahelay ayaa sheegaya in dadka la dilay ay ku jiraan Saraakiil sare oo hogaaminayey kooxahan, gaar ahaana mid kamid ah ragga sida aadka loo doon-doonayey, kaas oo in badan qeyb ka ahaa weerarada ay kooxahan ka geystaan buuraleyda Galgala, waxaana xogihii ugu dambeeyey ay shegayaan in ay ciidamadu wali wadaan dabagal ku aadan maleeshiyaadkan.
Filed in: W.Gudaha, Wararka Maanta, Warbixino
DAAWO:Masuul ka tirsan xisbiga UCID oo fashiliyey siraha Muuse Biixi & Arin aanan la filayn oo banaanka timid
DAAWO:Ururka Iskaashatada Qaadka ee Somalia oo weeraray ku qaaday Kenya & Madaxweyne Farmaajo oo gurmad culus helay “Dalkayaga Ayaa Nooga Qaalisan Wax Walba”
DAAWO:Hargeysa oo ay madaxa iskula jiraan Dowladda Hoose & Wasaarad kamid ah maamulka Muuse Biixi kadib markii….
DAAWO:Madaxweyne Denni oo Hargeysa looga soo hanjabay & Wasiir afka furtay kadib markii Goboladda Sool, Sanaag Iyo Cayn…..
5 thoughts on “DAAWO MUUQAAL: Al- Shabaab oo Saraakiil muhiim u ahaa iyo maleeshiyadii ugu badnaa ku weyday dagaalo & Duqeymo ka dhacay Buuraleyda Caalmadow.”
Saed June 4, 2018 at 8:32 pm · Edit
VIDEO KUMA JIRO EE DADKA LUGOOYADA KA DAAAYA
Wariyaha Khaaska ah June 4, 2018 at 8:55 pm · Edit
Wariyaha Khaaska ah June 4, 2018 at 9:50 pm · Edit
waa ku jiraa walala eeg markii hore cilad aya jirtay hadda saxay
Laaska June 4, 2018 at 8:57 pm · Edit
Hadaan nahay dhulbantaha xalaasha ah Waxaan nahay Soomaaliland Maanta reero isma hayaan ee ragbaa ishaya soomaali labadawladoodbey ahaayeene walaalkay ma daaroodism ayuu wadaa Dugsi maleh qabyaaladi waxay dumise mooyaane Waligiinba caaya dhulbahdnte Waanu tashanay oo waliba horumarnay Idinkuna xadkiinii kunoqda in taanan is Dilin Majeerteen waa dhulboob daaneyste ah oo keligiis inuu noolaado doonaya
Waanu Ku Dhiiri Galinaynaa Waanan Ku Garab Galaynaa Somaliland inay Xadkeeda Soo Xidhato Haddaad buuqa dayn waydaana Garoowaa Lakala Qaypin Koonfur iyo Waqooyi Sida Gaalkacyo
Markaa Cago dhigta majeertenow Kuwan Gudiga Burburinta Ku Sheegayzana dadka ka fadhiiziiya Maalin walpa dagaal ban soo qaadayna afka ahbay hayaane Haday wax isla hayaan lapadii duulaane hore ayay talaabo Ku durki lahaayen ciidanka qaranka.
“Afkanool Itaal Baranbaro” ayad tihiin
Ina Canbaashe June 4, 2018 at 8:58 pm · Edit
Sidii wasiir Koore sheegay ama Laascaanood ayaa laga qaxi ama Garoowe. Hadaba ama xaarmaajo hub iyo ciidan haydin siiyo ama idinku ciidangaas dhagool ah oo dacas sita soo ururiya Somaliland Cidna Ka Baryi Mayso inay Xududeheeda soo xidho.